Maalin Murugo Ah: 17 Ciyaartoy Oo Shalay Ku Dhintay Buur Ay Fuulayeen
HomeWararka MaantaMaalin Murugo Ah: 17 Ciyaartoy Oo Shalay Ku Dhintay Buur Ay Fuulayeen
26/04/2015 Abdiwahab Ahmed
Bulshada ciyaaraha ee adduunka ayaa maalin madow ku jira, waxay indhahdoodu eegayaan buurta adduunka ugu dheer ee Everest oo sannad kasta ay tagaan kumannaan qof oo ku soo ciyaara, kuwaas oo fanta buurtaas, hase yeeshee war naxdin leh ayaa xalay ka soo baxay.
Ugu yaraan 17 qof oo buuro-fanteyaal ah ayaa ku dhintay inta la xaqiijiyey oo ay ku jiraan agaasimihii Fulinta ee shirkadda Google iyo Dhakhtar Maraykan ah oo ka soo jeeda New Jersey.
Buurtan ay fananayeen ciyaartooyadan ayaa ruxantay isla markaana qaybo ka mid ahi ay soo dumeen markii uu dhul gariir cabbirkiisa lagu qiyaasay 7.8 magnitude uu ku dhuftay buuraha dhaadheeer ee waddanka Nepal, kaas oo soo gaadhay Everest.
Fredinburg iyo Sophia – Agaasimaha Fulinta shirkadda Googole iyo haweenayda ay isku cindanaayeen
Meel ku taalla buurta hoosteeda oo ay ku sugnaayeen boqollaal qof oo doonayey in ay buurta Fuulaan ayaa waxa ku habsaday dhagaxaan waaweyn iyo baraf ka soo daatay buurta markii uu dhul-gariirkaasi dhacay, waxaana illaa hadda si dhab ah loo xaqiijiyey 17 qof, hase yeeshee dhimashada ayaa la sheegay in ay intaas aad uga badan tahay, iyadoo ay jiraan dhaawacyo tiro beelay oo soo gaadhay ciyaartooyada buur-fanteyaasha ah.
Dhul-gariirka ayaa ka dhacay buurta Kumori ee wadanka Nepal oo dhererekeedu yahay 23,000 feet, taas oo dhawr may loo kaliya u jirta Everest oo lagu tilmaamo figta ugu dheer adduunka.
Buuraha Himalayas ayaa la aaminsan yahay in ay ku sugan yihiin boqollaal qof, kuwaas oo doonaya in ay koraan buurtaaas, hase yeeshee naftooda ayaa khatar weyn ku jira maadaama uu dhul gariir halkaas ku dhuftay.
Dr Marisa meydkeeda waxa qariyey baraf iyo dhagaxaan, markii dambe ayaana la helay iyadoo meyd ah
Agaasimaha fulinta shirkadda Google ee geeriyooday oo magaciisa la odhhan jiray Dan Fredinburg, da’diisuna ahayd 33 jir oo ay isku doonanaayeen Akhtarradda meteshay filmka One Tree Hill ee Sophia Bush, ayaa noqday qofkii ugu horreeyey ee la xaqiijiyey in uu ku dhintay buurtaas. Dr Marisa Eve Girawong oo 29 jir ah ayaa sidoo kale meydkeeda la helay iyadoo ay ku habsadeen baraf waaweyn oo ka soo dhacay figta sare ee buurta meel wakhtigaas ka sarraysay halka ay taagnayd 18,000 feet. Dr. Marisa kumay jirin dadka buurta fuulayey hase yeeshee waxay ahayd dhakhtar adeegyo caafimaad siinayey kuwa buurta fuulaya.
Dhul-gariirkan oo dhacay Sabtidii ayaa waxa ku dhintay 1,900 qof waxaanu saameeyey waddamada Nepal, India, China iyo Bangaladesh, waxaanu burburiyey caasimadda Qaddiimka ah ee Kathmandu ee wadanka Nepal, waxaana lagu tilmaamay masiibadii ugu xumayd ee soo marta Nepal muddo ka badan 81 sannadood.
Sannadkii hore, waxa ka dhacay buurta Everest masiibo kale markii ay 16 qof maalin kaliya ku wada dhinteen buurtaas.
Daawo Goolasha: Real Madrid 3-3 Las Palmas
02/03/2017 Abdiwahab Ahmed
Barcelona vs Eibar 6-1 – Highlights & Goals
19/09/2017 Abdiwahab Ahmed
Daawo: Brazil Oo Markii Ugu Horreysay Ku Guuleystay Olambiga + Laadkii Rikoodheyaasha Iyo Oohintii Germany
21/08/2016 Abdiwahab Ahmed